I-FAQs-Inkampani yaseShenzhen Dianyang yeTekhnoloji
Yintoni iTekhnoloji yokuThintela ukuTshisa?
Ngamafutshane, imaging eshushu yinkqubo yokusebenzisa ubushushu bento ukwenza umfanekiso. Imifanekiso eqingqiweyo eshushu isebenza ngokujonga kunye nokulinganisa inani lemitha ye-infrared ekhutshiweyo kwaye ibonakaliswe zizinto okanye ngabantu ukuze babonelele ubushushu. Ikhamera ye-thermal isebenzisa isixhobo esaziwa ngokuba yi-microbolometer ukuthatha la mandla ngaphandle nje kokukhanya okubonakalayo, kwaye uyijolise kumbukeli njengomfanekiso ochazwe ngokucacileyo.
Zintoni "iziTyikityo zobushushu"?
Ngamagama alula, ukutyikitya kobushushu kukubonakaliswa okubonakalayo kobushushu bangaphandle bento okanye bomntu.
Iyintoni loo ngxolo yokucofa?
Akukho sidingo sokukhathazeka, le yingxolo yekhamera yakho oyenzayo ngelixa uyitshintsha phakathi kweendawo ezahlukeneyo zokujonga. Ingxolo oyivayo yikhamera egxile kunye nokulinganisa umfanekiso ukufezekisa esona sigqibo siphezulu sinokubakho.
Zithini izixhobo ezinobushushu obusebenzayo bokusebenza?
Luthini uluhlu lwam lwezixhobo?
I-TIC yakho iyakwazi ukubona amaqondo obushushu naphina kuluhlu lwe -40 ° F ukuya kwi-1022 ° F.
Ngaba isixhobo asinamanzi?
Esi sixhobo sine-IP67 Rated casing, oko kuthetha ukuba kuqinisekisiwe ukumelana nothuli kunye nokuntywiliselwa emanzini, kodwa kuphela lixesha elikhethiweyo kubunzulu be-3.3ft. Qiniseka ukuba ucango lwerabha lwangasemva luvaliwe ngokupheleleyo kwaye lutywinwe ngaphambi kokuba uqhubeke ukunciphisa onke amathuba okungena kwamanzi kwi-TIC yakho.
Ndingayifaka okanye ndiyinxibe?
Ewe. Zonke izixhobo zokutyhila ziyilelwe ukuba zincanyathiselwe ngokulula okanye ziqhagamshelwe kumabhanti asebenzayo kunye nakwimpahla.
Ndingena / ndiguqula njani ulwimi kwisixhobo sam?
Xa uqala ukuseta i-TIC, uya kuyalelwa ukuba ukhethe ulwimi olukhethayo ukujonga ulwazi. Ukuba nangaliphi na ixesha ufuna ukuyitshintsha, ungaya kwi Imenyu> Isixhobo> IiLwimi, okanye ungasibuyisela isixhobo kuseto lwefektri kwaye uya kubuyiselwa umva kwiphepha lokukhetha ulwimi.
Ndingena njani kwimenyu?
Umahluko okhethekileyo kuzo zonke ezinye iimodeli kuthotho kukuba IZIKO iqhosha alifikeleli kwimenyu. Usenokuzibuza ukuba ikhona na imenyu? Impendulo kunjalo, ewe. Ukufikelela kwimenyu, cofa ngaxeshanye zombini KHOHLO kwaye KUNENE iqhosha kwaye ubambe okungenani umzuzwana omnye. Emva koko uya kuthunyelwa kwiscreen semenyu.